အဘိုးပြောသော ပုံပြင်များ( အပိုင်း-၁ )( Henry Aung ) — Steemit
အဘိုးပြောသော ပုံပြင်များ( အပိုင်း-၁ )( Henry Aung )
မင်္ဂလာပါ။ လွန်ခဲ့ သော ရက်အနည်းငယ်ခန့်က ကျွန်တော့ အဖေဖြင့် အချိန်အတော်ကြာအောင် စကားပြောဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော့ အနေဖြင့် ကျွန်တော်၏ မိသားစု မျိုးရိုးအကြောင်း family tree တခု ပြုစုနေသည် ဖြစ်ရာ အဖေဘက်မှ မျိုးရိုး အမေးဘက်မှ မျိုးရိုး စသည်ဖြင့် လေ့လာနေရပါသည်။ အများအား ဖြင့် ကချင်လူမျိုးများမှာ မျိုးရိုးနာမည် ပြောလိုက်သည် နှင့် မိမိတို့ မျိုးရိုးနှင့် အခြားမျိုးရိုးတို့ မည်သို့ တော်စပ်ကြသည်ကို ပြောနိုင်ကြပါသည်။
ကျွန်တော့ အနေဖြင့် တော့ အရမ်းကျွမ်းကျင်အောင် မပြောနိုင်သော်လည်း မိမိတို့ မျိုးရိုး မည်သည့် နေရာမှ ဆင်းသက်လာသည် မည်သူမည်ဝါက စစ်သူကြီး ဖြစ်သည် ၊ မည်သူမည်ဝါက မုဆိုးဖြစ်သည် စသည်ဖြင့် နှောင်မိမိသားသမီး များအား ပြောပြနိုင်ရန် စာတမ်းတခု ပြုစုနေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ မယုံမရှိပါနှင့် ကျွန်တော် ကျွန်တော့ ဖခင် ဖြင့် ဖုန်းဆက် မေးမြန်းရသော အကြောင်းမှာ ကျွန်တော့ အဖိုး ၏ အဖေ အဘေး အကြောင်းသိချင်၍ ဖြစ်ပါသည်။
အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် ကျွန်တော့ အဖေ က သူ့မျိုးရိုး ၏ အနောက် ဘက် အဘိုး ၊ အဘေး ၊ အဘီ ၏ နောက် အဆက် ၂၀ မြောက်အထိ နာမည် နှင့်တကွ အတိအကျ ပြောနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းသည်မှာ ကချင်လူမျိုးတို့သည် မည်သည့် မိသားစု မျိုးရိုး အကြောင်း ပြောသည် ဖြစ်စေ မိမိတို့ အဖိုး ၊ အဘေး ၊ တို့၏ နောက် အဆက်အဆက် ဖြစ်သော မိမိတို့၏ မျိုးရိုး ပထမဦးဆုံး လူအထိ ပြောနိုင်ကြပါသည်။
ကျွန်တော့ အနေဖြင့် လည်း မှတ်ညာဏ် ထိုမျှ မကောင်းနိုင်ရကာ စာတမ်းပြုစုထားလျင် အချိန်မရွေး ပြန်ဖတ်နိုင်၍ မှတ်မိ နိုင်စရာ အကြောင်းရှိသကဲ့သို့ ထိုစာတမ်းအား မိမိတို့ သားသမီးများအား အမွေပေးခဲ့ခြင်း ဖြင့် မျိုးရိုးအကြောင်း သိနိုင်ကြသလို မျိုးရိုးအား တလေးတစား ထိန်းသိမ်းရာရောက်သောကြောင့်ထိုသို့ စာတမ်းပြုစုထားရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဤဆောင်းပါးမှာ ကျွန်တော့ မျိုးရိုးအကြောင်း ဖေါ်ပြရန် မဟုတ်သော်လည် ကျွန်တော့ ဖခင် နှင့် ဖုန်းပြောရင်း ကျွန်တော် မေးမြန်းခဲ့သောအဘိုး အကြောင်းကို ဖေါ်ပြလိုရင်း ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော့ အဘိုးမှာ သာမန် လယ်သမား တောင်ယာ ခုတ်၍ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း သူသာ ဖြစ်သော်လည်း အဖိုးမှာ ဖက်ဆစ်ဂျပန် တော်လှန်ရေး ကာလတွင် ကချင်ပြည်နယ် အတွင်းစုစည်းဖွဲ့စည်းခဲ့သော ကချင် ရိန်းဂျား စစ်သား တယောက်ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော် အဘိုးအား မှတ်မိသော အချိန်မှာအဘိုး အတော်အိုစာ နေပြီ ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် မီးဖို ဘေးတွင် နှီးဖြာရင်း ရေနွေးကြမ်းသောက်ရင်း ကျွန်တော်တို့ ခလေးများအားသူကြုံတွေ့ခဲ့ရသော ဘဝအတွေ့အကြုံများ အကြောင်း ပြောပြခဲ့ပါသည်။ ထို အချိန်တုန်းကတော့ ကျွန်တော်လည်းအဘိုးပြောပြသော အကြောင်း အရာများအား ပုံပြင် ပြောပြနေသည်ဟုသာ ထင်မှတ်နေခဲ့မိပါသည်။
ဆိုခဲ့သည့် အတိုင်း အဘိုးတို့ ကချင် ရိန်းဂျား စစ်သားများမှာ အမေရိကန်လေထီး စစ်သားများနှင့် တွဲ၍ တိုက်ပွဲ ဝင်ရခြင်း ဖြစ်ကာ ထိုအချိန်တုန်းက ( ဒုတိယကမ္ဘာစစ် ပြီးခါနီးကာလ ) အမေရိကန်တို့မှာ တရုတ်ဖြူဟု ခေါ်သော ချန်ကေရှိတ်၏ စစ်တပ်အား အိန္ဒိယ၊ ကချင် ဟူးကောင်း တနိုင်း ဖက်မှ တရုတ်ပြည် အထိ ဖေါက်လုပ်ထားသော လီဒိုလမ်း မတလျှောက် စစ်လက်နက်ပစ္စည်း များ အကြီးအကျယ် ထောက်ပံ့နေချိန်ဖြစ်ပါသည်။
အဘိုးတို့ ကချင်ရိန်းဂျားစစ်တပ် မှာ အမေရိကန်စစ်သားများ ဖြင့်တွဲ၍ ထိုလီဒို လမ်းမတလျှောက် တပ်ပျက် နေသော ဂျပန်များ အား တိုက်ထုတ်ရသလို မြစ်ကြီးနားဘက်မှ စစ်ရှုံး၍ ဆုတ်ခွာလာခဲ့သော ဂျပန်များအားလည်း လမ်းခုလတ်မှ ဖြတ်တိုက်ရသည်ဟုပြောခဲ့ပါသည်။
ထိုအချိန်တုန်းက တော့အဘိုးပြောပြသည်မှာ အင်္ဂလိပ် စကားပြောလျင် မိမိတို့ မဟာမိတ် ဂျပန် ဟူသမျှ မိမိတို့ ရန်သူ ဟူ၍ သာ သိထား၍ တိုက်ပွဲ ဝင်ခဲ့ကြသည်ဟု ပြောပြခဲ့ပါသည်။ အဘိုးပြောပြခဲ့သော တိုက်ပွဲ တော်တော်များများ တွင် ကျွန်တော် အမှတ်တရ ရှိနေသော တိုက်ပွဲ တခု ရှိပါသည်။
အဘိုး ပြောပြချက်အရ ထိုတိုက်ပွဲမှာ ရှမ်းပြည် မြောက်ဖက် လွယ်ဆမ်ဆစ် ( ရှမ်းဘာသာစကားဖြင့် တောင်သုံးဆယ် ဟူ၍ အဓိပါယ် ရပါသည်) အနီးတဝိုက်ရှိ တောနက်ထဲတွင် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုတောထဲတွင် နံနက်စောစော ဂျပန် တပ်စု တစုဖြင့် တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားပြီးနောက် ထိုဂျပန်တပ်စု တစုလုံး အပြီး တိုင် ချေမှုန်းလိုက်ပြီးသော အခါ ထိုနေရာတဝိုက်တွင် နံနက်စာ ချက်ပြုတ်စားသောက်ရန် ခေတ္တ စခန်းချကြသည်ဟု ပြောပြခဲ့ပါသည်။
ချက်ပြုတ်ရန် တာဝန် ၊ ခဲယမ်း မီးကျောက်များ စစ်ဆေးရန် တာဝန် ၊ ကင်း တို ကင်းရှည် စောင့် ရန် တာဝန် အသီးသီး ယူကြပြီးနောက် အဘိုးနှင့် အမေရိကန်စစ်သား တယောက်မှာ ကင်းရှည် စောင့်ရန် တာဝန်ယူရပါသည်။ ကင်းရှည် မှာ မိမိ စခန်းနှင့် အတော် ဝေးသော နေရာထိ သွားစောင့်ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ဆိုခဲ့သည့် အတိုင်း အဘိုးမှာ ထိုအမေရိကန် စစ်သားနှင့် ကင်းစောင့်ရန် လိုက်သွား ပြီးနောက် မိမိတို့ စခန်းနှင့် အတော် ဝေးသော နေရာသို့ ရောက်သော အခါ ကင်းစောင့်ရန် နေရာရှာကြပါသည်။ ထို အနီးတဝိုက်တွင် ဝက်သစ်ချ ပင် ကြီး တပင်တွေ့၍ ထိုအပင် အောက် တွင် ကင်စောင့်ရန် သွားသော အခါ မထင်မှတ်ထားသော မြင်ကွင်းကို တွေ့ရပါတော့သည်။
ထိုဝက်သစ်ချ ပင်အောက်တွင် ဂျပန် ၁၀ ယောက်ခန့်နှင့် ကုလား လူမျိုး အတော်များများသေနေကြသည်ကို တွေ့ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထူးဆန်းသည်မှာ စစ်သုံး ကျည်ဆန် သေတ္တာ ( သစ်သား သေတ္တာ ) သုံးလုံး ၊ အခြားပွင့်နေသော သေတ္တာ ၂ လုံး နှင့် အနီး တဝိုက်တွင် ရွှေဝါ ဆပ်ပြာခဲ ကဲ့သို့ ဝါညစ်ညစ် အရောင်ရှိသော ဆပ်ပြာတောင့်များကလည်း ပြန်ကျဲလျက်ရှိသည်ဟု ပြောပြခဲ့ပါသည်။
အဘိုးကလည်း ဆပ်ပြာရှားပါး ချိန်ဖြစ်၍ လိုရမယ်ရ အသုံးပြုရန် ဟူ၍ ဆပ်ပြာတတောင့် ကောက်ယူလိုက်သောအခါ ထိုဆပ်ပြာတောင့်မှာ အတော် လေးနေ၍ မသင်္ကာသဖြင့် ဘက်နက် ( စစ်သုံး ဓါးမြှောင် ) ဖြင့် ထိုးခွဲ ကြည့်လိုက်သောအခါ အထဲတွင် ဝင်းနေသောရွှေသားကို တွေ့ရပါတော့သည်။
အမှန်တော့ အဘိုးပြောပြသည်မှာ ထိုဆပ်ပြာကဲ့သို့သော အတောင့်လေးများမှာ ရွှေတုံးများအား ဖယောင်းအုပ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ပြောပြခဲ့ပါသည်။ ထို့ နောက် အဘိုးကလည်း သူ၏ ကျည်ဆန်များထည့် ထား သော စစ်သုံးကျောပိုးအိတ်အား ချ၍ ထိုရွှေတုံးများကောက်ယူ ထည့်ခဲ့သည်ဟု ပြောပြခဲ့ပါသည်။ အတူပါလာသော အမေရိကန်စစ်သားကတော့အဘိုးအား အင်္ဂလိပ်ဘာသာ စကားဖြင့် တတွတ်တွတ်တိုးတိုး ပြောနေသော်လည်း အဘိုးအနေဖြင့် နားမလည်၍ ဘာပြောမှန်း မသိပါ။
ထို့ နောက် အမေရိကန် စစ်သားမှာ ထို ဖယောင်းအုပ်ထားသော ရွှေတုံးများအား တတုံးပြီး တတုံး အဝေးသို့ ကောက်ယူ လွင့် ပြစ်နေခဲ့ပါသည်။ ပြန်ကျဲနေသော ရွှေတုံများကုန်သွားလျင် ကျန်ရှိသော ကျည်ဆံ သေတ္တာအား ဖွင့်ကြည့်လိုက်သောအခါ ထို သေတ္တာ ၃ လုံးလည်း ရွှေချောင်းများ ဖြင့် ပြည့်နေသည်ဟု ပြောပြပါသည်။
အမေရိကန်စစ်သားကလည်း ထို သေတ္တာ ၃ လုံးရှိ ရွှေချောင်းများ ကုန်သည်အထိ အနီးအနား တဝိုက် သို့ တခုပြီး တခု အကုန်ထုတ်ယူ လွင့်ပြစ်လိုက်ပါသည်။ ထိုရွှေချောင်းများကုန်သွားသော အခါ ထို အမေရိကန်စစ်သားက သူ၏ ဒိုင်ယာရီ စာအုပ် အသေးလေး ထုတ်၍ အနီး ပတ်ဝန်ကျင် အနေအထားများကို ရေးမှတ်နေခဲ့သည်ဟု ပြောပြခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက် အဘိုးမှာ ကင်းဆက်စောင့် နေသော်လည်း အမေရိကန်စစ်သားကတော့ သူ့ဒိုင်ယာရီ စာအုပ်လေးဖြင့် တကုတ်ကုတ် ရေးခြစ်နေခဲ့သည်ဟု ပြောပြခဲ့ပါသည်။ ထို အချိန်တွင် ရုတ်တရက် အဘိုးတို့ စခန်းချခဲ့သော နေရာမှ သေနတ်သံများ ကြားရသောကြောင့် အဘိုးတို့လည်းသေနတ်ဆွဲ၍ စခန်းသို့ အမြန်ပြန်ရန် ပြင်ရပါတော့သည်။
ထိုအခါမှ ပြသနာတက်ပါတော့သည်။ အဘိုး၏ ကျောပိုးအိတ်မှာ ရွှေချောင်းများဖြင့် ပြည့်နေ၍ လေးလွန်းသောကြောင့် လွယ်မရတော့ပါ။ သေနတ်သံများက တစစ ပို၍ ဆူညံလာပြီး ဖြစ်သဖြင့် အဘိုးကလည်း တိုက်ပွဲ အတွင်း၌ ကျည်ဆံထက် ပို အရေးကြီးတာဘာမှ မရှိဘူး ဟူ၍ ထိုကောက်ထည့်ထားသော ရွှေချောင်းများအား အားလုံး ထုတ်ယူလွင့်ပြစ်၍ စခန်းရှိရာသို့ ပြေးသွားရပါတော့သည်။
အဘိုးတို့ တပ်စုလေးမှာ ရှေ့ပြေးရိန်းဂျားတပ်ဖြစ်၍ လက်နက်ကြီးများ မပါကြပါ။ အားလုံး ရိုင်ဖယ် သေနတ်များသာ ကိုင်ကြရ၍ အမေရိကန်များကတော့ စတင်းဂန်း ဟူသော စက်သေနတ်များ ကိုင်းကြသည်ဟု ပြောပြခဲ့ပါသည်။ ဆိုခဲ့သည့် အတိုင်း ထိုတိုက်ပွဲတွင် ဂျပန်တို့ အင်အားများ ၍ အဘိုးတို့ တပ်စုကလည်း အောင်မြင်စွာ ဆုတ်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ကြရကြောင်းပြောပြပါသည်။
ထိုတိုက်ပွဲတွင်အဘိုးနှင့်အတူ ကင်းစောင့်ခဲ့သော ရွှေချောင်းများ ကောက်ယူ လွင့်ပြစ်ခဲ့သော အမေရိကန် စစ်သား ကျဆုံးသွားခဲ့ကြောင်း လည်း သိခဲ့ရပါသည်။အဘိုးပြောပြခဲ့သော တိုက်ပွဲ အကြောင်းမှာ ထိုမျှသာ ဖြစ်ပါသည်။
ထိုစဉ်တုန်းကတော့ ကျွန်တော်လည်း ငယ်သေးသည်ဖြစ်၍ ကမြင်းကြောထရန်မှ လွဲပြီးထွေထွေထူးထူး မစဉ်စားခဲ့ကာ အဘိုးအား ထိုရွှေချောင်းများတွေ့ခဲ့သော နေရာ ဒေသ ပုံစံ ၊ မည်သည့်ရွာ ဖြင့် မည်မျှ ဝေးသည် ၊ ကားလမ်း၏ အရှေ့ အနောက် မည်မျှ သွားရသည် ဘယ်နှစ်ရက် သွားရသည် စသည် ဖြင့် မေးထားခဲ့လျင် ယခု အချိန်ကဲ့သို့ Google map များ ပေါ်လာသည့် အချိန်တွင် အနည်းဆုံး မည်သည့်နေရာလောက်တွင် ရှိနိုင်သည်ဟု ခန့်မှန်း၍ ရနိုင်ပါသည်။
ယခုတော့ ထိုနေရာအတွက် ခြေရာခံနိုင်သော သတင်းမှာ လွယ်ဆမ်ဆစ် အနီး တဝိုက်ရှိတောနက်ဟုသာ သိရပါတော့သည်။ လွယ် ဆမ်ဆစ်၏ အရှေ့ အနောက် တောင် မြောက်မှန်းလည်း မသိ။ ကျွန်တော်လည်း ကျွန်တော့ ဖခင် ဖြင့် ဖုန်းပြောရင်း အဘိုးပြောပြခဲ့သော ထိုရွှေချောင်း အကြောင်းကို မေးမိပါသည်။ အဖေကလည်း " အေး.. နင့်အဘိုး ပြောပြလို့ အဖေလည်း ခဏခဏကြားရတယ် အဲအကြောင်းတွေ ။ ဒါပေမယ့် သားမေးသလို အဖေလည်း နေရာဒေသ သေချာ မမေးထားမိဘူး " ဟူ၍သာ အကြောင်းပြန်ခဲ့ပါသည်။
ကျွန်တော်လည်း လွယ်ဆမ်ဆစ်၏ တောနက်တနေရာတွင်ပြန့်ကျဲတည်ရှိနေမည် ဖြစ်သော ထိုဖယောင်းအုပ်ထားသော ရွှေတုံးများအား မြင်ယောင်ကြည့်ယုံသာ တတ်နိုင်ပါတော့သည်။
myanmar life knowledge
အင်ဒီရာနာဂျုံး လို 😂
အမေရိကန် စစ်သားက နှပ်တယ်နော်။ ဒါနဲ့ ကိုဟင် အဖိုးက အဲ့ စစ်သားရဲ့ ဒိုင်ယာရီ စာအုပ်ကို မယူထားမိလိုက်ဘူးလား။
ကိုဒုန် admin တွေစုပြီး ရှာကြရအောင် လုပ်ဗျာ
လောဘ လောဘ ထိန်းကြပါခွယ်
အယ်လေ ငါပြောတော့မကောင်းရှိရော့မယ်အေ လောဘ လောဘ
တနေ့နေ့ တော့ သွားရှာကြည့်တာပေါ့... Steem ဈေးလည်း ၅၀၀၀$ လောက်ဖြစ် ဆောင်းပါး တပုဒ်ကို ၁၀ သိန်းလောက်ရ ... ရွှေတွေလည်း ရှာ ... ရွှေရှာ တဲ့ အကြောင်း ဆောင်းပါးလည်းရေး.... ဪ... လောဘလောဘ
ဟိုက သေနတ်နဲ့ လိုက်ပြစ်နေတာလေ... စိမ်ပြေးတမ်းကစားနေတာမှ မဟုတ်တာ...
မြေပုံဆွဲတယ် ကချင်ကြီးကလက်တွေ့ကျတယ်နော် သယ်တယ်😁
ကချင်ကြီးကသယ်တယ် .... ပြီးတော့ ပြန်လွင့်ပြစ်ခဲ့ရတယ်။
ကဲဟေ့ လူစုကြစို့ ရွှေရှာခရီးထွက်ကြမယ်။ တောင်အလုံးသုံးဆယ်ကို ပြဲပြဲစင်အောင် တက်ရှာကြတာပေါ့။
ဘယ်နေ့သွားကြမယ်ဆိုတာလောက်တော့ အသိပေးပါအုံး.... ကျွန်တော်ကျန်ခဲ့မှာစိုးလို့ ။
မြေပုံလေးဘာလေး ဆွဲမလာူခဲ့ဘူးလား ကိုဟင် ဘယ်တောင်ကြားက ခြေဘယ်နှစ်လှမ်းအကွာတို့ဘာတို့ အတိအကျလေး သိရရင် သွားရှာကျရအောင် msc တွေ
အဘိုးအနေနဲ့ အချိန်ရခဲ့ရင်တော့ တခုခု မှတ်သားခဲ့မယ်လို့ ထင်တာပဲ။ အဲဒီမှာ တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပြီး ဆုတ်ခွာခဲ့ရတော့။ ပြီးတော့ တောတောင် တွေက အားလုံးနီးပါး ဆင်တူတွေ ဆိုတော့။
attention all members တောတွင်းသို့ကာ တောတွင်းသားများ အဖြစ် ဝင်ရောက်ကြပါစို့
htetwaihin (53) ·3months ago
ဗွက် ဖနပ်တောင် ၀ယ်ထားပီ ☺☺☺
မြေပုံ လမ်းညွန်လေး အလင်းပြပါ။
Your article is simply fabulous. You have presented very good ideas.
ခုအချိန် ရွှေချောင်းတွေ ဒီအတိုင်းရှိပါဦးမလား ဟို အမေရိကန်ကြီး မြေပုံဆွဲနာလား မသိဘူး နော် ။ ဂျပန်တွေ ပြန်သယ်ပြီး နေရာပြောင်းထားပြီလဲဖြစ်နိုင်တယ် ။ မတော်တဆများ သေတ္တာ တစ်လုံးလောက် တူးမိလိုက်တဲ့သူကတော့ ဟိဟိ ။ ကျွှန်တော်တို့ကျ နှမျောစရာ ကောင်းတာက အဘေးဆိုရင် ဘယ်လိုလူမန်းမသိရတော့ဘူး ။
ဒိုမီ ရဲ့ မိဘတွေရှိရင်တော့ အဘိုးအဘွား တွေ အကြောင်း မေးထားသင့်တယ်။ အစ်ကိုတို့ ကချင်တွေကြတော့ မသိလို့ကို မရတာ။
လွယ်ဆမ်ဆစ် နားမှာ ဘယ်လိုနေရာတွေမှာ တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့သလဲဆိုပီး ဒေသခံ ရှေ့မီနောက်မီတွေကို မေးစမ်းပြီး လိုက်ရှာကြရအောင်လေ ။ မတွေ့တော့လည်း MSC Hiking trip လို့ သဘောထားလို့ရတာပေါ့။ 😄😄😄
အဲဒါလည်း ကောင်းတာပဲ.... လူအုပ်ကြီးနဲ့ သွားရှာ ... တွေ့ရင်တော့ ထောပြီပဲ။ ဒါမဟုတ် လောဘတွေ တက်ပြီး အချင်းချင်း သတ်ကြမှာလည်း စိုးရိမ်ရသေး
တောက်ထွက်ရင် လွမ်လွယ်ဆစ်ဘက်မှာ ထွက်မှပါ မတော်လို့ရွှေချောင်းတွေ့ရင် steem ဝယ်စုလို့ ရတာပ့
ဦးဇင်း ရွှေချောင်း တွေ တွေ့ရင် အသိပေးပါအုံး... တပါးတည်း ကောက်မနိုင်မှာ စိုးလို့။
ng-chitsonelay (41) ·3months ago
moewaikamawet (47) ·3months ago
ထိုက်တဲ့သူဆိုရင်တော့ ရမှာပဲ။ ပြီးတော့ စစ်ပွဲကာလ မဟုတ်ရင် တောတက် တောင်ဆင်း နဲ့ တခုမဟုတ် တခုတော့ တွေ့ကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
mjoker (37) ·3months ago